ဆူးလေအမှတ် (၇) တံတားတွင် ဆိုက်ကပ်ခဲ့သော MV. HAI DUONG .36 သင်္ဘောပေါ်မှ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်း
Post date: Friday, February 1, 2019 - 14:36
၂၁-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဆူးလေအမှတ် (၇) တံတားတွင် ဆိုက်ကပ်ခဲ့သော MV. HAI DUONG .36 သင်္ဘောပေါ်မှ ဝမ်းပုံတင်ဆောင်လာသော ယူရီးယား ဓါတ်မြေသြဇာ (Ureas Inbulk) များကို Greap ဖြင့် သယ်ယူ၍ Hopper ထဲသို့ ချပေးပြီး အလိုလျောက် အိတ်သွတ်စက်ဖြင့် အိတ်သွတ်ချုပ်ပြီးနောက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပုံကို တွေ့မြင်ရစဉ်
Post date: Friday, February 1, 2019 - 14:34
ဆိပ္​ကမ္​းသံုး တြန္​း/ဆြဲ ​ေရယာဥ္​ "မာန္​​ေအာင္​-၄" လႊဲ​ေျပာင္​း​​​
Post date: Wednesday, November 7, 2018 - 09:56
၃၂ မီတာ၊ ျမင္​း​ေကာင္​​ေရ ၃၀၀၀ ဆိပ္​ကမ္​းသံုး တြန္​း/ဆြဲ ​ေရယာဥ္​ "မာန္​​ေအာင္​-၄" လႊဲ​ေျပာင္​း​​​
ဆိပ်ကမ်းသုံး တွန်း/ဆွဲ ရေယာဉ် “မာန်အောင်-၄” လွွှဲပြောင်း
Post date: Wednesday, November 7, 2018 - 09:43
၃၂ မီတာ၊ မြင်းကောင်ရေ ၃၀ဝ၀ ဆိပ်ကမ်းသုံး တွန်း/ဆွဲ ရေယာဉ် "မာန်အောင်-၄" လွှဲပြောင်း
Study on Template TransactionDocuments under PPP Contracts for Key Infrastructure
Post date: Tuesday, April 4, 2017 - 14:59
ဆိပ်ကမ်း ကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ချုပ်ဆိုကြသည့် စာချုပ်များအား ပိုမိုချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ Japan International Cooperation Agency (JICA) နှင့် ဥပဒေ အကြံပေးအဖွဲ့ Kelvin CHIA တို့မှ ပူးပေါင်းပြီး Study on Template Transaction Documents under PPP Contracts for Key Infrastructure in Myanmar လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးမှုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ရုံးချု
Collaboration between European companies and Myanma Port Authorities
Post date: Tuesday, April 4, 2017 - 14:36